Ciidamo Oromo ah oo Aargoosi ku Xasuuqay Soomaali badan | Somalimedia
Ciidamo Oromo ah oo Aargoosi ku Xasuuqay Soomaali badan
13 Rag ah oo Soomaali ah ayaa ku dhintay weerar Ciidamo ka tirsan Dowlad Degaanka Oromada Itoobiya ay ku qaadeen Ganacsato Soomaali ah
Weerarkan ayaa ka dhacay degaanka Hawadaay oo ka tirsan dhulka Oromada Itoobiya,waxaana falkaani la sheegay in uu yahay mid aargoosi ah oo ay Oromada u geysteen Soomaalida Itoobiya.
Sanadihii la soo dhaafay waxaa jiray dagaal u dhaxeeyay dowlad Degaanka Oromada Itoobiya iyo Ismaamulka Soomaalida Itoobiya,iyada oo ay dad badan ku dhinteen.
in ka badan 500 Qof ayey iska dileen Ciidamada labada dhinac oo sidoo kalena aan deyneyn dadka rayidka ah,waxaana Sanadkan billowgisii labada dhinac ay heshiis ka gaareen dagallada u dhaxeeyay.
Dagaalka Oromada iyo Soomaaliya ayaa ka billowday dhul ballaaran oo ku yaalla sohdinta labada maamul oo ay isku heystaan cidda xukumeysa,waxaana markii ugu dambeysay heshiis u kala saxiixay labada dhinac labada Madaxweyne Goboleed ee Maamullada Oromada iyo Soomaalida.
Raggan la laayay ayaa Ganacsatada qaadka ka ahaa degaankaas,waxaana ay Qaad ka soo qaadan jireen dhinaca Oromada iyada oo ka hor falkan ay jirtay digniin ay heysteen dadka labada dhinac oo ah in aargoosi uu dhinac kasta sameyn karo,taas oo hadda ku dhacday Soomaalida.